Uganda Wildlife Authority Jacob Kiplimo Akpa Gold
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Egwuregwu » Uganda Wildlife Authority Jacob Kiplimo Akpa Gold
Akụkọ na -agbasa na Czechia • Egwuregwu • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Uganda Wildlife Authority kelere ya
Ndị na -ahụ maka anụ ọhịa Uganda (UWA) toro dị ka nke ya Jekọb Kiplimo meriri na 5000 mita International Amateur Athletic Federation (IAAF) 2020 Ostrava Golden Spike World Athletics zutere na Czech Republic. O meriri ihe kachasị amasị maka ihe omume ahụ - Ethiopian World Championship Silver Medalist Selemon Barega.
Onye na-agba ọsọ 19 dị ogologo oge Kiplimo lụrụ ọgụ megide Barega na ụlọ ọkụ ọkụ na-agba ọkụ iji merie 12: 48.63 - otu n'ime 7 zutere ndekọ iji daa n'abalị doro anya na obodo Czech ọwụwa anyanwụ ebe a na-ahapụ ndị na-ekiri 3,000. gaa Mestsky Stadium iji nyere aka mee ememme nnọkọ mbipụta nke 59.
Naanị 3:30 ka agba ọsọ ahụ, ọ bụ Barega na-agba ọsọ n'azụ onye ọzọ nke Etiopia, Lamecha Girma, onye na-ele anya na ọ ga-achịkwa. N'iji 4 gafere, ọ nọworị naanị ya ma dị n'ihu nke mkpọ.
Ma Kiplimo, onye na-agba ọsọ nke ọma n'agbata usoro nke etiti nke ọsọ ahụ, rụrụ ọrụ ọ laghachite n'ihu, na-aga n'ihu n'ihu na usoro 2 ga-aga. Ọ nọgidere na-edu ndú mgbe mgbịrịgba na-ada 11:52 na elekere.
Barega tinyere nrụgide ahụ, mana Kiplimo adapụghị. Onye Etiopia ahụ mere mgbalị ikpeazụ ya maka mmeri ahụ ka ha kụrụ ụlọ kwụ ọtọ, na-adọta ọbụlagodi mgbe ụzọ ahụ gbanwere n'ụzọ zuru ezu-ije, otu akụkụ. Kiplimo lụrụ ọgụ na nke ahụ wee wepụ ihe dị ka mita 40.
Barega kụrụ na 12: 49.08 ka ọ laghachi azụ Yemaneberhan Crippa ruru akara na 13: 02.26 iji mebie ndekọ Italiantali.
"Achọrọ m oge kachasị ọsọ, n'ihi ya, anọgidere m na-asọ asọ," ka Kiplimo, bụ Silver Medalist na-agba n'ọsọ ndị isi na asọmpi World Cross Country Championship nke afọ gara aga. “Ọ bụ ọgụ na mgba n'ụlọ. Ọ dịkwa egwu. ”
Ọ bụkwa nnukwu mmeri mbụ nke onye na-eto eto mgbe ọ laghachiri na mmerụ ahụ.
Amụrụ na Nọvemba 14, 2000, Kiplimo si na anụ ụlọ nke Uganda Wildlife Authority ndị egwuregwu gụnyere nwa amaala Winnie Nanyondo onye sonyekwara n'egwuregwu 1500 nke gbara 9th.
Kiplimo nọchiri anya obodo ya na 2016 Summer Olympics. Ọ bụ 2017 IAAF World Cross Country Junior onye mmeri. Na 2019, ọ ghọrọ World Cross Country Silver Medalist mgbe ọ dị afọ 18.